Shariif Sheekh Axmed oo la shiray oday dhaqameedka Beesha Abgaal Cismaan, isaga oo kala hadlay arrimo quseeya Dekedda Muqdisho. Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Shariif Sheekh Axmed oo la shiray oday dhaqameedka Beesha Abgaal Cismaan, isaga oo kala hadlay arrimo quseeya Dekedda Muqdisho. Madaxweyne Shariif ayaa heben hore shir isugu yeeray qaar kamid ah odoyaasha dhaqanka Beesha Abgaal, kadib markii Beesha Waceysle ay madaxweynaha u jeedisay Digniin ku saabsan inuu ilaaliyo nidaamka iyo kala danbaynta Maamulka dawladnimo, kadib markii Madaxweynuhu uu shaqadiisa ka hor istaagay Maareeyaha Dekedda Cabdullaahi Cali Nuur oo si sharci ah ay jagadaasi ugu magacaabeen uu RW Cabdiweli Gaas iyo Wasiirka dekedaha.
Madaxweyne Shariif ayaa ka codsaday odoyaasha beesha Abgaal Cismaan ee uu shirka la yeeshay ineysan aqbalin magacaabidda uu sameeyay Raisul wasaare Cabdiweli, isaga oo u sheegay in ay arintaasi ku tahay bahdil iyo wax aan la qaadan karin isaga, madaxweynaha ayaa u sheegay in uu marhore goaansaday inuu Sayid Cali xilka ka qaado balse wuxuu sheegay in RW cabdiweli iyo golihiisa wasiiradda ay is hor taageen xil ka qaadistaas iyo magacaabid uu madaxweynuhu damacsanaa, madaxweynaha ayaa u sheegay inuu doonayo inuu jagadaas buuxiyo nin lagu magacaabo Amiir oo kasoo jeeda Beesha Mataan cabdulle,inkastoo uu sheegay inay arintaasi kasoo horjeedaan Golaha wasiirada intooda badan ee uu hogaamiyo Cabdiweli Gaas.
Si kastaba ha ahaatee odoyaasha ayaa u sheegay inay ka soo tashanayaan codsiga madaxweynaha, iyaga oo sheegay inay is arki doonaan dibna war ugu soo celin doonaan.
Sikastaba ha ahaatee magacaabida Cabdullaahi cali nuur ayaa la sheegayaa inay u dhacday si waafaqsan sharciga ishortaaga madaxweyne Shariifna aysan ahayn mid ku salaysan sharciga, maadaama madaxweynaha oo maqan ay golaha wasiiradda soo gudbiyeen iskuna raaceen, kusimaha madaxweynaha oo markaas ahaa Shariif Xasana uu aqbalay magacaabida Maareeyaha cusub.
Iyada oo xiliga dawladda haatan jirtaahi uu gebogebo yahay ayaa la sheegayaa in madaxda dawladu u kala ordayaan sidii ay usii boobi lahaayeen hantida shacabka, taasina ayaa la sheegayaa inay tahay tan ku qasabtay madaxweynaha inuu sharcigii ilaalin waayo, oo ay kaliya u muuqato sidii inta waqtigiisa laga gaarayo uu usii qaadan lahaa hantida kasoo xaroota dekedda magaalada Muqdisho..